Permaculture benefits seen in community - The Zimbabwean
Permaculture benefits seen in community
More than 80 rural villagers here are benefitting from organic conservation agriculture initiatives that utilize material from their natural environment rather than using chemicals that are harmful for the environment.
Villagers in Hwedza have seen positive results from permaculture initiatives.
The initiative resulted in a pilot project being launched here by Fambidzanai Permaculture Centre. The farmers received training on organic conservation agriculture and 21 farmers were presented with certificates on organic standards theory and application, in collaboration with the Zimbabwe Organic Producers and Promoters Association Trust.
Following the training, rural farmers here are relying on materials like cow dung, tins, bones, decomposed manure and leaves to improve the fertility of their fields.
Fambidzanai Permaculture centre is a training center that was established in 1988. The centre has fostered the creation of four other development institutions namely The Natural Farming network, the Schools and Colleges Permaculture, African Farmer Organic Research and Training, and Participatory Ecological Land Use Management.